जाजरकोट र हुम्लामा उम्मेदवारी हेरफेर, प्रदेश ६ मा को–को उठ्दैछन् ? – Vision Khabar
जाजरकोट र हुम्लामा उम्मेदवारी हेरफेर, प्रदेश ६ मा को–को उठ्दैछन् ?
। ५ कार्तिक २०७४, आईतवार १५:१७ मा प्रकाशित
कार्तिक ५, काठमान्डौं । एमाले स्थानीय कमिटीको व्यापक असन्तुष्टिपछि बाम गठबन्धनले हुम्ला र जाजरकोटको प्रदेशसभा उम्मेदवारी हेरफेर गरेको छ ।
एमालेको भागमा परेको जाजरकोट ( क ) माओवादी केन्द्रले पाएको छ । हुम्लामा माओवादीले प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभाका दुई वटै क्षेत्रमा उम्मेदवारी पाउने सहमतिपछि एमाले जिल्ला कमिटीले असन्तुष्टि जनाएको थियो । त्यस्तै, जाजरकोटमा प्रतिनिधीसभामा माओवादी र प्रदेशसभामा दुई वटै क्षेत्र एमालेले पाउने निर्णय भएको थियो ।
माओवादी केन्द्रले जाजरकोटमा शक्ति बस्नेत र पश्चिम रुकुमबाट जनार्दन शर्मालाई सांसदमा दोहोर्‍याउँदैछ । जुम्ला (क) बाट नरेश भण्डारी र कालिकोट (ख)बाट महेन्द्रबहादुर शाहीलाई उठाउँदैछ । त्यस्तै रुकुम पश्चिम (क) बाट गोपाल शर्मा र (ख) बाट रातु कामी उठ्दैछन् भने डोल्पा (ख)मा वीरबहादुर शाहीले उम्मेदवारी पाएका छन् ।
कॉग्रेसले जाजरकोटबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि राजीवविक्रम शाहलाई दोहोर्‍याएर उम्मेदवारी दिएको छ । त्यस्तै, कालीकोटमा भूपेन्द्रजंग शाही, हुम्लामा मंगल शाही, जुम्लामा देवेन्द्र शाही, मुगुमा हस्तबहादुर मल्ल, डोल्पामा अंगद बूढा, रुकुम पश्चिममा वीरबहादुर ओलीले उम्मेदवारी दर्ता गर्दैछन् । निवर्तमान सांसद जीवनबहादुर शाही प्रदेशसभा सदस्यका लागि हुम्ला (ख) बाट उठ्दैछन् । हुम्ला (क) बाट ठानबहादुर रोकाया उम्मेदवारी दिदैछन् भने जाजरकोट (क)बाट वेदराज सिंह र (ख) बाट दिपकजंग शाह उठ्दैछन ।